Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay. – iftiin fm
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale aqalka madaxtooyada ku qaabilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay.
Madaxweyne farmaajo ayaa hambalyeeyey Maalinta Caalamiga ah ee Xorriyadda Saxaafadda.
Madaxweyne farmaajo ayaa madaxdani uu soo bandhigay qorshaha dowladdiisa kuadan dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyada oo tallaabooyin muuqda loo qaaday dhankaas, taas oo ay tusaale u tahay qiimaynta sannadlaha ah ee ay 2020-ka sameeyeen ururrada u dooda warfidiyeenka oo xaqiijiyay in dalkeennu uu sameeyey horumar dhanka xorriyadda iyo xuquuqda saxaafadda ah.
Madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay door muhiim ah siisay horumarinta saxaafadda, iyada oo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda Warbaahinta lana meel mariyey shuruuc iyo xeer ilaaliye u gaar ah saxaafadda si looga hortago tacaddi iyo meel-ka-dhac kasta oo ka dhan ah warbaahinta.
← Tababare Mauricio Pochettino oo ka hadlay xiddiga Kylian Mbappe.
Mareykanka oo farta ku fiiqay dowladda Shinaha . →